အမေရိကန်မှကုန်သည်အဖွဲ့များ၊ ဘောဂဗေဒပညာရှင်များက တရုတ်ကုန်စည်များအပေါ် စည်းကြပ်ခွန်များ ဖယ်ရှားရန်တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
နယူးယောက်၊ မေ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုမှာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ နီးပါး တဟုန်ထိုးမြင့်တက်လျက်ရှိရာ အမေရိကန် ကုန်သည်အဖွဲ့များနှင့် ဘောဂဗေဒပညာရှင်များက အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ကို ထိခိုက်စေသည့်အခွန်အတုတ်များဖြစ်သည့် ထရမ့်အစိုးရလက်ထက်က ပြဌာန်းခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံမှ ပို့ကုန်များအပေါ်ထားရှိသည့် စည်းကြပ်ခွန်များကို ဖယ်ရှားရန် ဘိုင်ဒန်အစိုးရကို တွန်းအားပေးလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ စည်းကြပ်ခွန်များမှာ ကောင်းမွန်သောမူဝါဒ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ စားသုံးသူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မလိုအပ်သည့်အခွန်ဖြစ်ကြောင်း ထိုအခွန်များကို ပယ်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ် အနိမ့်ဆုံးလျှော့ချခြင်းကသာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို လျော့ပါးစေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အပြင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအလားအလာကိုလည်း တည်ငြိမ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
သို့ရာတွင် မကြာမီ ‌ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလ သို့ ရောက်ရှိခါနီးချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် တင်းမာသည့် သဘောထားရပ်တည်ချက်ရှိသည့် အချို့သောအမတ်များက တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်စည်များအပေါ် အခွန်အခများကိုဖြေလျှော့မည့်အရေး ထောက်ခံရန်တွန့်ဆုတ်နေကြပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူများအတွက် မှန်ကန်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်ရန်ရှောင်ဖယ်နေကြသည်။
အိမ်ဖြူတော်မှ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်အပါအဝင် အရာရှိများစွာက ယခင် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်၌ တရုတ်ကုန်စည်များအပေါ် ချမှတ်ခဲ့သည့် စည်းကြပ်ခွန်များကိုဖြေလျှော့ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် အချို့ရှိကြောင်း အရိပ်အမြွက်ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က “ကျွန်တော်တို့ အခု အဲဒါကိုပဲ ဆွေးနွေးနေတာပါ၊ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေပါတယ်၊ ဒီအပေါ်မှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ ချမှတ်ထားတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး” ဟုဆိုသည်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေး ဒုတိယအကြံပေးဖြစ်သူ Daleep Singh နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Janet Yellen တို့ က ဧပြီလနှောင်းပိုင်းလောက်တွင် တရုတ်ထုတ်ကုန်များအပေါ် အခွန်လျှော့ပေါ့နိုင်သောအလားအလာရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည့် ထုတ်ပြန်ချက်များထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် သိပ်မကြာခင် ဘိုင်ဒန်က ထိုသို့မှတ်ချက် ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရီပတ်ဘလင်ကန်အမတ်တစ်ဦးဖြစ်သော Mike Crapo က တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် စည်းကြပ်ခွန်ကောက်ခံမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၁ ကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။ ၎င်းက“မိမိတို့အနေနဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေ နောက်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ အထူးသဖြင့် လူလတ်တန်းစားနဲ့ ဝင်ငွေနည်းပါးတဲ့မိသားစုတွေ သုံးစွဲနေရတဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်အခွန်မကောက်ဖို့လိုပါတယ်” ဟု လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီကြားနာမှု၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ဆယ်စုနှစ် ၄ ခုအတွင်း အမြင့်ဆုံးသောငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရခြင်းကြောင့် ထိုသို့ ပြောဆိုမှုများ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပြီး စားသုံးသူ ဈေးနှုန်းအညွှန်းကိန်း CPI မှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ မှစတင်ကာ တစ်နှစ်လျှင် ၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော်လာခဲ့သည်။ မေ ၁၁ ရက်တွင် အလုပ်သမားဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် အချက်အလက်များအရ ဧပြီလ ၌ CPI မှာ ယမန်နှစ်ကထက် ၈.၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြင့်လာခဲ့ပြီး ယင်းမှာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ၈ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိခဲ့သော ဒုတိယမြောက် လဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုမှာ ဧပြီလတွင် လျော့ကျသွားမည့်လက္ခဏာများပြသော်လည်း နောက်ဆုံး ကောက်ယူထားသည့် CPI အချက်အလက်များက ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် ခရီးရှည်ကြီးတစ်ခုကျန်ရှိသေးသည်ဟူသော “အထူးသတိပေးချက်တစ်ရပ်” ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း Wells Fargo Securities မှ ဘောဂဗေဒပညာရှင်များဖြစ်ကြသည့် “Sarah House နှင့် Michael Pugliese တို့က လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
“အမေရိကန်လူမျိုးတွေဟာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတိုးမြင့်လာမှုတွေနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တိုးမြင့်လာမှုတွေကြောင့် မပျော်ရွှင်နိုင်ကြတော့ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် မကြာခင်မှာ အခွန်ငွေလျှော့ပေါ့ပေးခြင်းကသာ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းစေမှုနဲ့အတူ ဝယ်လိုအားမြင့်တက်မှုကိုဖြစ်စေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ၊ အထူးသဖြင့် စားသုံးကုန်တွေမှာပေါ့” ဟု တရုတ်နိုင်ငံနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်သည့် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၆၀ ကို ကိုယ်စားပြုသော အမေရိကန်-တရုတ် စီးပွားရေးကောင်စီ (USCBC) က ဆင်ဟွာသတင်းဌာနသို့ မေ ၁၁ ရက် တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုန်သည် အဖွဲ့အစည်းက ကနဦး ပြောကြားရာ၌ သမ္မတထရမ့် သက်တမ်းကာလ၌ ကျင့်သုံးခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် ထပ်တိုးအခွန်ကောက်ခံမှုအား ဆက်လက်ကျင့်သုံးရန် အကြောင်းမရှိသလို ထိုသို့ကောက်ခံမှုများမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ သုံးစွဲသူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက်လည်း မလိုအပ်သည့်အခွန်အခများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင် ယင်းမှာ မူဝါဒ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းလည်း မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။ ကျယ်ပြန့်သော ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည့် အမေရိကန်လူမျိုးများအတွက် လွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်မှုအဖွဲ့က လည်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၁ ၏ စည်းကြပ်ခွန် ကောက်ခံမှုများသည် အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ လယ်သမားများနှင့် မိသားစုများအပေါ် “စီးပွားရေးဝန်ထုပ်ပိစေရန်သာဖန်တီးနေကြောင်းနှင့် ၎င်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် နောက်ကောက်ကျစေမည် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပြဿနာနှင့် အတူ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် ဝန်နှင့်အားမမျှဘဲ ဘေးသင့်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း” မကြာသေးမီက သတိပေးခဲ့သည်။
စည်းကြပ်ခွန်များကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်သမားများကိုသာ ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ဘဲ ကုန်ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာစေမည့်အပြင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအလားအလာ များကလည်းစတင်မြင့်တက်လာကြောင်း၊ “တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် ထရမ့်၏ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ဆင်မှုက နည်းလမ်းစုံဖြင့် ကျရှုံးနေကြောင်း” ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည့် Axios ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ဂယက်ကိုခါးစည်းခံနေရချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်ကုန်များအပေါ် ထပ်ဆောင်းအခွန်ကောက်ခံမှုကို ပယ်ဖျက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အနိမ့်ဆုံးလျှော့ချခြင်းသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းကို လျော့ပါးစေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ငွေကြေးဖောင်းပွမှု အလားအလာများကိုလည်း တည်ငြိမ်စေမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘောဂဗေဒပညာရှင်များက ဆိုသည်။
Peterson Institute for International Economics (PIIE) ၏ ပြင်ပမှ အကြီးတန်းသုတေသီ Gary Hufbauer နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်ကြသည့် Megan Hogan နှင့် Yilin Wang တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်ကုန်များအပေါ်တွင် CPI ၏ ၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှော့ပေါ့ပြီး ထပ်တိုးအခွန်ကောက်ခံမှုကို ပယ်ဖျက်ခြင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိသော်လည်း အဓိကအားဖြင့် မူလတန်ဖိုး၌ ၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းကို ထပ်မံပေါင်းထည့်ပါက သွယ်ဝိုက်သောထိခိုက်မှုများရှိလာနိုင်သည်ဟူသော ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကို မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သုတေသနတစ်ခုတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
“ယင်းမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံက အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် သိပ်ကိုကြီးမားတဲ့ အချက်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ပြီး နောက်ထပ် စိန်ခေါ်မှုပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု တန်ဖိုးကို မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ ဈေးနှုန်းကလည်း အတန်အသင့်တော့ တိုးမြင့်လာဦးမှာဖြစ်တယ်” ဟု အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ Hufbauer က ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံကိုအခွန်လျှော့ပေးလိုက်ရုံဖြင့် ကုန်ဈေးနှုန်းလျော့ကျမှုက ထိထိရောက်ရောက်လျှော့ချနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ဆိုသော တုန့်ပြန်ချက်များကို ဖြေရှင်းသည့်အနေဖြင့် Hufbauer က “ဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ပြဿနာကို ပြေလည်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုခု လုပ်လိုက်တာဟာ ဘာမှ လုပ်မနေတာထက်စာရင်တော့ပိုကောင်းတယ်မဟုတ်လား”ဟုဆိုသည်။
“ဒီတော့ အဲဒီမှာ အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာမယ် ၊အဲဒီမှာ ဖက်ဒရယ်ရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုလျှော့ချမယ်၊ အဲဒီမှာ အခွန်အခတွေကိုလျှော့ချမယ်၊ အဲဒါတွေအားလုံးမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလာပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ “သိပ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေး အထောက်အပံ့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့အခါမှာ အသေးအဖွဲကစလို့ အခက်အခဲတွေရှိလာပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
PIIE လေ့လာမှု ရဲ့ ညွှန်ပြချက်တွင် “ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒဖြေလျှော့ရေးအစီအစဉ်” က တစ်ကြိမ်လျှင် CPI ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ၁.၃ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင် လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။ ထို့သို့ဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုစီလျှင် ဒေါ်လာ ၇၉၇ ဒေါ်လာ သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူ Lawrence Summers ၏ အမြင်မှာ ယခုကဲ့သို့ အခွန်များကိုဖယ်ရှားပြီး ငွေကြေးဖောင်းပွမှု လျှော့ချခြင်းမှာ အခြားအရာများထက် ပိုမိုအရေးပါကြောင်း ၊ ဆန့်ကျင်မှုများကြားကပင် နောက်ထပ် ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ်အတွင်း အောင်မြင်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း၊ နောက်ပြီး ၎င်းမှာ အသားထုပ်ပိုးမှုဈေးနှုန်းပြင်ဆင်တာထက် ပိုမို အရေးပါဖွယ်ရှိကာ သမ္မတအဆက်ဆက် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဖြေကြားထားသည်။
Bloomberg Television မှ မေးမြန်းမှုတွင် Yellen က ထရမ့်လက်ထက်က တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်သတ်မှတ် ထားရှိသည့်အခွန်များကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို နှစ်လိုဖွယ်သက်ရောက်မှုအချို့ ဖြစ်မည့်အပြင် ယင်းမှာ စဉ်းစားရကျိုးနပ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
အခွန်လျှော့ချမှုအပေါ် တွန်းအားပေးနိုင်မည့် အလားအလာများရှိလင့်ကစား နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ ၏ အလားအလာကိုခုံမင်နေကြသည့် အချို့လွှတ်တော်အမတ်များသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အခွန်လျှော့ပေါ့မှုအပေါ် ထောက်ခံရန် ဝန်လေးနေကြကြောင်း လေ့လာသူများကဆိုသည်။
Iowa လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ Greg Cusack က “ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တွေဟာ အခွန်ဥပဒေတွေအပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံအကြား အမျိုးမျိုးသော တင်းမာမှုတွေကိုပြေလျော့စေမယ့် ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာဖို့တော့သိပ်မရှိလောက်ဘူး” ဟု ဆင်ဟွာသို့ပြောသည်။
ဝါရင့်ဒီမိုကရက်တစ်ဦးဖြစ်သူ Cusack က “ရီပတ်ဘလစ်ကန်တွေ မြေတောင်မြှောက်ပေးထားခဲ့တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာ ပိုပြီး လက်ယာယိမ်းဝါဒရှိတဲ့အပြင် လက်ရှိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ထက်လည်း ပိုမိုအစွန်းရောက်ပါတယ်၊ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာရှိတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့အခုထက်ပိုမို တိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ အားနည်းချက်တွေ ဒါမှမဟုတ် တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ထိုးနှက်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူး” ဟုဆိုသည်။
“လွှတ်တော်မှာ သူတို့ရဲ့မဲရလဒ်တွေတိုးမြင့်လာနိုင်ခြေမရှိရင် ဒါမှဟုတ် မဲဆွယ်ကမ်ပိန်းရန်ပုံငွေတွေမရနိုင် ဘူးဆိုရင် “မှန်ကန်တဲ့ ကိစ္စ” ကို လုပ်ဖို့လည်း သူတို့ဟာ သိပ်ပြီးစိတ်ဝင်စားကြတာမဟုတ်ဘူး” ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။
ဝါရှင်တန်ပို့စ် ၏ အဆိုအရ မစ်ဆိုရီပြည်နယ်မှ လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ Josh Hawley က “ လူကြိုက်များသည့် လက်ယာယိမ်းဝါဒကိုဆွဲကိုင်ရန်ကြိုးပမ်းကာ” “ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် ပျော့ပျောင်းနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး” ဟု မကြာသေးမီက တွစ်တာစာမျက်နှာတွင် ရေးသားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“တရုတ်နိုင်ငံကိုအားပေးထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ နိုင်ငံစုံ ကော်ပိုရေးရှင်းကိုပြန်လည်တူးဖော်ကာ အမေရိကန်လုပ်သားများကို နောက်ချန်ရစ်ခြင်းဟာ ကမ္ဘာ့ကျွမ်းကျင်သူတွေ နှစ်သက်ကြပေမဲ့ ကျရှုံးစေတဲ့မူဝါဒသာဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်လုပ်သားများအရေးကို ဦးစားပေးရမှာသာဖြစ်ကြောင်း” ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီမှ တက်သစ်စ ကြယ်ပွင့်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယင်း၏ မှတ်ချက်အောက်တွင် တွစ်တာ အသုံးပြုသူတစ်ဦးက “ အဲဒါကပဲ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိုဖြစ်စေခဲ့တာလေ။ ခင်ဗျားတို့က ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို မကျေနပ်ကြဘူး၊ နောက်ပြီး အဲဒီငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိုလျော့ပါးအောင်ကြိုးပမ်းကြတဲ့အခါကျတော့လည်း မကျေနပ်ကြပြန်ဘူး၊ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ အသုံးဝင်တဲ့အဖိုးတန်တဲ့ နည်းလမ်းမရှိဘူးလို့သာပြောလိုက်ပါလား၊ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ မကျေနပ်ဘူးလို့ပဲခင်ဗျားတို့က ပြောချင်တာကိုး” ဟု ရေးသားထားသည်။
အခြား တွစ်တာအသုံးပြုသူတစ်ဦးကလည်း “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုတည်းအတွက် လုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကစားပွဲတွေကိုရပ်လိုက်ကြပါတော့” ဟု ရေးသားထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံကိုခြယ်လှယ်ရန်ကြံရွယ်ကြသူများတွင် ရီပတ်ဘလစ်ကန်များသာမက Ohio မှ ဒီမိုကရက်တစ် လွှတ်တော်အမတ် Tim Ryan ကလည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် “ဗျူဟာမရှိဘဲ” အခွန်အခများလျှော့ချပေးခြင်းသည် အလွန်ကြီးမားသည့် အမှားကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိကြောင်းနှင့် အမေရိကန်လုပ်သားများ၏ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်း အပြစ်ဖို့ထားသည်။
လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွင် ဘိုင်ဒန်အစိုးရအနေဖြင့် ထရမ့်လက်ထက်က အခွန်ကောက်ခံမှုများကို လျှော့ချရန် တွန့်ဆုတ်နေရခြင်းမှာ ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ပါက တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် ပျော့ပျောင်းလာသည်ဟူသော ဝေဖန်မှုများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရဖွယ်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း Hufbauer က ဆိုသည်။
Hufbauer က “သူတို့ အဲဒါကိုစိုးရိမ်ခဲ့ကြတာပါပဲ၊ ဒါဟာ သူတို့အဖို့ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်ကိုလုပ်ဖို့၊ အမေရိကန် စီးပွားရေးအတွက် မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်ကို လုပ်ဆောင်ဖို့ အတားအဆီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
အောက်လွှတ်တော်နှင့် အထက်လွှတ်တော်တို့သည် အမေရိကန်၏ COMPETES ဥပဒေ ပြဌာန်းမှုကို သဘောတူညီ ဖွယ်ရှိပြီး ယင်းအနက် semiconductor စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဒေါ်လာ ဘီလီယံနှင့်ချီသည့် ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့မှုများပါဝင်သောကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်များအပေါ် အကောက်ခွန် လျှော့ချမှုကို တိုးချဲ့သွားနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ကုန်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူက ယူဆထားသည်။
လွှတ်တော်အမတ်များက Summer ၏ ယူဆချက်များကို လက်မခံကြခြင်းသည် အခွင့်အရေး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတွင် သေးငယ်သော်လည်း စုပေါင်းလိုက်ပါက သိသာထင်ရှားသည့် အကောက်ခွန်လျှော့ပေါ့မှု တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း Hufbauer ကဆိုသည်။
China Institutes of Contemporary International Relations မှ သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ Chen Fengying က ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကတည်းက ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဟာ တစ်စထက်တစ်စ အရှိန်မြင့်လာခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အထိနာစေခဲ့ကြောင်း ဆင်ဟွာသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
China Institutes of Contemporary International Relations မှ သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ Chen Fengying က
“ ဒါဟာအားလုံးအပေါ်ကိုသက်ရောက်နေတာပါ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဟာ တကယ်တော့ ယုတ္တိမရှိတဲ့အပြင် နှစ်ဖက်စလုံးကိုအထိနာစေတယ်လေ။ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာ အခွန်စည်းကြပ်နေလို့ အမေရိကန်တွေအတွက် အကျိုးမဖြစ်စေပါဘူး၊ ဒီတော့ အချို့အခွန်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာက အခု အမေရိကန်တွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာနေတဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ကိစ္စရပ်တွေကို ပြေလည်စေဖို့အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်၊ နောက်ပြီးဒါဟာ အမေရိကန်က သုံးစွဲသူတွေအတွက်လည်းကောင်းကျိုးဖြစ်စေတယ်လေ” ဟုဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ကျောက်လိကျန်းက
“တရုတ်-အမေရိကန် စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ အပြန်အလှန်အမြတ်ထွက်မယ့် ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်၊ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ ဒါမှမဟုတ် အခွန်စစ်ပွဲမှာ အနိုင်ရသူဆိုတာမရှိပါဘူး၊ အခွန်စစ်ပွဲမှာ အမေရိကန်က အခွန်စည်းကြပ်မှုကိုမလျှော့ပေါ့ဘူးဆိုရင် အပြန်အလှန်အားဖြင့် အဲဒါက အမေရိကန်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အမေရိကန်သုံးစွဲသူတွေပဲ ကုန်ကျစရိတ်များပြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အခွန်ဥပဒေစတင်သက်ရောက်လို့ရှိရင် အဲဒါဟာ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေအဖို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၇ ထရီလီယံကုန်ကျစေမှာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်အိမ်ထောင်စုတွေအပေါ်နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၁,၃၀၀ လောက်ကျသင့်မှာပါ၊ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ အခွန်တွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး အဲဒီအခွန်ကောက်ခံမှုတွေကို အမြန်ဆုံး ပယ်ဖျက်သင့်နေပါပြီ” ဟုဆိုသည်။
ဆင်ဟွာသတင်းထောက်များက ဝါရှင်တန် ဒီစီမှ သတင်းပေးပို့နေခြင်းဖြစ်သည်။(Xinhua)
As inflation hovers neara40-year high, U.S. trade groups and economists have been urging the Biden administration to scrap Trump-era additional tariffs on Chinese imports, regarding such tariffs as counterproductive to the U.S. economy.
But with the mid-term elections coming up, some lawmakers, who are keen to takeatough stance toward China, might be reluctant to support the easing of China tariffs, refraining from doing the “right thing” for American businesses and people.
Several White House officials, as well as President Joe Biden himself, have signaled that the administration is weighing whether to dismantle at least some of former President Donald Trump’s tariffs on Chinese goods.
SOUNDBITE 1 (English): JOE BIDEN, U.S. President
“We’re discussing that right now. We’re looking at what would have the most positive impact. No decision has been made on it.”
Biden’s remarks followed recent statements by Deputy National Security Adviser Daleep Singh and Treasury Secretary Janet Yellen, who spoke about the potential easing of tariffs on Chinese products in late April.
Republican Senator Mike Crapo also called for “thoughtful application” of the Section 301 tariffs on China. “We need to cut tariffs on inputs that support American manufacturing, or on goods consumed by the American consumer, especially middle and low-income families,” he said ataSenate Finance Committee hearing.
Such voices came as the United States is experiencing the highest inflation in four decades, with the consumer price index (CPI) staying over6percent year-on-year since October last year. According to the Labor Department’s data released Wednesday, CPI in April surged by 8.3 percent fromayear ago, marking the second straight month of inflation over 8 percent.
Although price growth showed signs of easing in April, the latest CPI data “served asastark reminder” that the Federal Reserve hasalong road ahead of it in bringing down inflation,” Sarah House and Michael Pugliese, economists at the Wells Fargo Securities, said in an analysis.
“Americans are unhappy about rising inflation and costs, so providing tariff relief soon is one way to lower prices and increase demand, especially for consumer goods,” the U.S.-China Business Council (USCBC), which represents 260 American companies that do business with China, told Xinhua on Wednesday.
The trade group said earlier that there is “no reason” to maintain the additional tariffs on Chinese products imposed during Trump’s presidency, as they were an “unnecessary tax” on U.S. consumers and businesses “for no good policy purpose.”
Not only hurting U.S. businesses and workers, tariffs also drive up prices, and inflation expectations are starting to rise, according to an Axios report entitled “Trump’s trade war on China wasafailure in every possible way.”
In recent research, Gary Hufbauer,anonresident senior fellow at the Peterson Institute for International Economics (PIIE), and his colleagues Megan Hogan and Yilin Wang argued that the direct effect of eliminating additional tariffs on Chinese products would bea0.3 percentage point reduction in CPI, but there would also be an indirect effect, which will add “substantially” to the 0.3 percentage point.
“It would beapretty big signal to U.S. firms that they are going to face more competition and that might cause them to moderate their price increases as inflation rolls forward,” said Hufbauer, alsoaformer U.S. Treasury official.
In reaction to the argument that reducing the China tariffs would not lead toameaningful reduction in prices, Hufbauer said it doesn’t completely eliminate the inflation problem, “but it’s better than doing nothing.”
“So there’s raising interest rates, there’s cutting back federal spending, there’s reducing tariffs, all of those things have some impact,” he said. Against the backdrop ofared-hot economy, “every little bit counts.”
The PIIE study showed that “a feasible trade liberalization package” could deliveraone-time reduction in CPI inflation of around 1.3 percentage points. That would save 797 dollars for every U.S. household.
In the view of Former U.S. Treasury Secretary Lawrence Summers, this inflation reduction through tariff removal is “more significant” than anything that can be achieved over the next two to three years through antitrust action, and it is probably much “more important” than the meat packing price fixation, which has been the subject of several presidential events.
Even Yellen said in an interview with Bloomberg Television that removing Trump-era China tariffs would have some “desirable” effects on inflation and “it’s worth considering.”
“The midterms are very unlikely to result in any relaxation of the various tensions between U.S. and China, including tariff legislation,” Greg Cusack,aformer member of the Iowa House of Representatives, told Xinhua.
“Candidates being fielded by the Republicans are even more right-wing and extreme than the current congressional membership, and Democratic candidates across the board will be fighting an uphill battle in which they cannot afford to be seen as ‘weak’ or as in any way ‘caving to China’,” said Cusack,alongtime Democrat.
“Congress does not havealot of incentive to do the ‘right thing’ unless it is likely to boost their poll standing or bring in more campaign funds,” he noted.
Senator Josh Hawley of Missouri, who, according to the Washington Post, “tries to grab the mantle of right-wing populism,” recently tweeted that now is “not the time to go soft on China.”
“Enriching China & woke multinational corporations on the backs of American workers isafailed policy favored by the globalists. Put American workers first,” said the Republican Party’s rising star.
Leaving his comment below,aTwitter user said: “It is literally causing inflation. You complain about inflation. And you complain when they try to alleviate inflation. Just say that you don’t haveavalue system. You want to say no.”
“We need to put what is best for our country, notapolitical party. Stop playing games,” wrote another user.
It’s not just Republicans who want to play the China card. Democratic congressman Tim Ryan of Ohio claimed that lifting tariffs on “non-strategic” goods from China would beamajor mistake, blaming China for U.S. workers’ economic woes.
Under the current political environment, Hufbauer said the Biden administration could be reluctant to remove the Trump-era tariffs, because it would have to face criticism for being “soft” on China.
“They’re worried about that, and that prevents them from doing the right thing, the right thing for the U.S. economy,” Hufbauer said.
SOUNDBITE2(Chinese): CHEN FENGYING, Researcher of China Institutes of Contemporary International Relations
“Everyone is reflecting. The trade war that started in 2018 is in fact irrational and harmful to both sides. It is not in America’s interest to impose tariffs inaglobalized environment. Therefore, the removal of some of the tariffs will be helpful for addressing issues that the U.S. is facing right now, including structural inflation. And it’s also good for American consumers.”
SOUNDBITE3(Chinese/English): ZHAO LIJIAN, Chinese Foreign Ministry spokesperson
“China-U.S. economic and trade cooperation is mutually-beneficial and win-win in nature. There is no winner inatrade war or tariff war. The tariff war so far hasn’t reduced the trade deficit of the U.S. On the contrary, it brings more costs to American companies and American consumers. It cost American companies 1.7 trillion U.S. dollars. And it cost American households 1,300 U.S. dollars each year since the tariffs took effect. It is time for the U.S. administration to reconsider the tariffs and to cancel them as early as possible.”
Xinhua News Agency correspondents reporting from Washington D.C.